Maxamakadda Ugu Sarreysa Mareykanka Oo Go’aan ka Gaartay Dacwado loo Haystay Trump. – Awdalmedia
Labo guddi oo ka socda Aqalka Wakiillada ee ay maamulaan xisbiga Dimuqraaddiga iyo xeer ilaaliyaha degmada New York – oo sidoo kale ka tirsan dimuqraaddifa – ayaa dhowr dalbada xogta ku saabsan dhowr sano oo canshuur celinta madaxweynaha ah.
Waxay sheegeen inay eegayaan sida ay isku waafaqayaan danaha Mr Trump u gaarka ah iyo kuwa qaranka.
Mr Trump, oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay.
Wuxuu baaritaanka lagu hayo ku tilmaamay “Ugaarsi gardarro ah”.
Labada guddi ee ka socda Golaha Wakiillada ayaa dalbaday xogta dhaqaale ee ku saabsan labo bangi oo uu la macaamilo Mr Trump – kuwaasoo kala ah Deutsche Bank iyo Capital One – iyo sidoo kale xogta la xiriirta koontooyinka madaxweynaha.